Sphynx သင်ခန်းစာအတွက် Penny ဆွယ်တာ – အဆိုပါ Tailoress
June 3, 2021 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကြောင်များ, tutorials
ယင်း၏အကျယ်တလျှောက်တွင်ဝက်အတွင်းအင်္ကျီလက် CUFF ခေါက်. Match the raw edges of the folded CUFF to the SLEEVE.
Ease (stretch the CUFF enough to reach from side to side) onto the end of the SLEEVE. pin နှင့်ချုပ်.
Take the HEM CUFF and NECKLINE CUFF (refer to Step5if you are using the NECK WARMER CUFF) and fold in half RIGHT SIDES together to createacontinuous loop. ရေတိုချုပ်ရိုးစရိတ် pin နှင့်ချုပ်.
Match the FRONT to the front side of the SLEEVE. pin နှင့်အဖြစ်မရောက်မီချုပ်.
ထပ်ခါတလဲလဲအဆင့် 3-4 အဝတ်၏အခြားဘက်များအတွက်.
အဝတ်အနားပေးဖို့အနား CUFF Apply, အတူတူလက်ျာဘက်၌. Match the centre front and back points.
အရပျ၌ pin နှင့်ချုပ်ပြီးတော့အညီအမျှပတ်ပတ်လည်ဖြေလျှော့.
လှမ်း7– with hood
Skip to Step 10 if you are using the NECK WARMER or Step 13 အဆိုပါ NECKLINE CUFF များအတွက်.
အတူတကွ hood ကိုအပိုင်းပိုင်းညာဘက်ခြမ်းကို တင်.. Pin and stitch around the outside seam line.
လှမ်း 10 – with neck warmer
Find the centre front and centre back locations on the NECKWARMER and main garment neckline. Match the raw edges of the NECK WARMER to the garment neckline. pin နှင့်ချုပ်.
Fold the NECKLINE CUFF in half, matching the raw edges. Ease the NECKLINE CUFF around the neckline opening, အတူတူလက်ျာဘက်၌.
← Sphynx များအတွက် Cleopatra Pajama သင်ခန်းစာ